အကောင်းဆုံးယဇ်ကို ဘုရားအား ပူဇော်ခြင်း | အနန္တတန်ခိုးရှင် ဘုရားသခင် အသင်းတော်
ကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ချီးမွမ်းခြင်း သီချင်းများ
အမှုအဆင့်သုံးဆင့်သည် လူသားကို ဘုရားစီမံခန့်ခွဲမှုအကြောင်း အားလုံးပြောပြ၏ကျူး ဘုရားသခင်၏ခြေရာတော်များအားမည်ကဲ့သို့ရှာရမည် နည်း ဘုရားသခင်၌သာ အသက်လမ်းရှိ နောက်ဆုံးသောကာလ၏ လူ့ဇာတိခံဘုရားသည် နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် လူကိုစုံလင်စေ၏ကျူး လူတို့၏ကံကြမ္မာကို ဂရုပြုကြလော့ အရာအားလုံး ဘုရား၏လက်ထဲမှာ ဘုရားသခင့်အမှုကို ဘုရားကိုယ်စား မည်သည့်လူမျှ မလုပ်နိုင်ကျူ ဘုရားသခင်၏ အသက်စွမ်းအား ပြယုဂ် လူ့ဇာတိခံယူသော လူသားသည် ဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည် ဘုရားရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို အဘယ်ဖန်ဆင်းခြင်းသတ္တဝါမှ မပိုင်ဆိုင် နောက်ဆုံးသောကာလတွင် ဘုရားသခင်သည် လူကို သူ့နှုတ်ကပတ်တော်များဖြင့် တရားစီရင်ကာစုံလင်စေသည် Myanmar Gospel Music 2020- ဘုရား လူကိုစီမံခန့် ခွဲခြင်း၏ အရေးပါပုံ Chinese Gospel Music Video | ဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်ကို ဘယ်တော့မှပြန်မရ Chinese Gospel Music Video | ဘုရား၏နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် အရာရာပြီးမြောက်၏ | Myanmar Lyrics သမ္မာတရားကို ရှာဖွေလိုက်စားခြင်းအားဖြင့် ပြဿနာအားလုံးကို ဖြေရှင်းနိုင်သည် Chinese Gospel Music Video | လူသား၏ပုန်ကန်ခြင်းသည် ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်ကို နှိုးဆွ၏ | Myanmar Lyrics Chinese Gospel Music Video | ဘုရားသခင်သည် သင်ဆိုသကဲ့သို့ ရိုးရှင်းသလောကျူး | Myanmar Lyrics (ငယ်ရွယ်သူတို့ လုပ်ဆောင်ရမည့်အချက်များ) Chinese Worship Song Myanmar Gospel Music Video 2020 - ဖာရိရှဲတို့ ယေရှုကို ဆန့်ကျင်ရခြင်းအကြောင်းရင်း Myanmar Christian Music Video 2020 - ဘုရားသခင်၏ ဘုန်းတော်သည် အရှေ့အရပ်မှ ထွန်းလင်းတောက်ပ၏ Myanmar Gospel Music Video 2020- ဘုရား၏ဦးဆောင်လမ်းပြမှုကို လူသားမျိုးနွယ်ဆုံးရှုံးခြင်း၏ အကျိုးဆက်ကျူး ချစ်စရာအကောင်းဆုံး လူ့ဇာတိခံယူသောဘုရား နိုင်ငံတော်ခေတ်တွင် ဘုရားသခင်သည် လူသားကို နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့် စုံလင်စေ Myanmar Gospel Music - လူတို့ကို စီရင်ခြင်းအတွက် ဘုရား၏ အခြေခံအကြောင်းရင်းကျူး ဘုရားသခင်သည် လူသား၏အဆုံးသတ်ကို ၎င်းတို့၌ သမ္မာတရား ရှိမရှိအပေါ် အခြေခံ၍ ဆုံးဖြတ်တော် မူ၏ Myanmar Gospel Music (အနန္တတန်ခိုးရှင်ဘုရားသခင်သည် ဘုန်းပလ္လင်ပေါ်၌ထိုင်တော်မူပြီ) Myanmar Gospel Music 2020 - လူသားအပေါ် ဘုရားသခင်၏ဒဏ်ခတ်ခြင်းနေ့ရက်သည် ယခုရောက်ရှိလို့လာပြီ Myanmar Gospel Music 2020 (ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်၌ ဘုရားသခင်၏ တစ်ခုတည်းသော ဆန္ဒ) အကောင်းဆုံးယဇ်ကို ဘုရားအား ပူဇော်ခြင်း ဘုရားပေါ်ထွန်းခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက် Myanmar Gospel Music 2020 - သမ္မတရားအတွက် အရာအားလုံးကို စွန့်လွှတ်သင့် နောက်ဆုံးသောကာလ၏ ခရစ်တော်ကို စွန့်ပယ်သူများသည် ထာဝရ အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကို ခံစားရလိမ့်မည် လူသားမျိုးနွယ်အပေါင်း၏ ဖြစ်တည်ခြင်းမှာ ဘုရားသခင်အပေါ်၌ အခြေပြုထား၏ လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဖန်ဆင်းရှင်၏ ရိုးသားစစ်မှန်သော စိတ်ခံစားမှုများ Myanmar Gospel Music 2020 (အမှုတော်သစ်လက်ခံသူများ မင်္ဂလာရှိ) Myanmar Gospel Music Video 2020 (အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့် ဘုရားဆင်းကြွလာ) Myanmar Worship Music 2020 (ဘုရားသခင်၏နှိမ့်ချ မှုသည် အလွန် ချစ်စဖွယ် ကောင်းသည်) လူသားမျိုးနွယ်အတွက် ဘုရား၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာ မှန်ကန်ကာ စစ်မှန်သည် Myanmar Gospel Music 2020 (ဘုရား၏စကားသည် ထာဝရအမှန်တရား) Myanmar Gospel Music (အရာအားလုံးအပေါ်ရှိဘုရားသခင်၏ အချုပ်အခြာအာဏာမှတစ်ဆင့်ဘုရားကို သိကျွမ်းလော့ကျူး) Myanmar Gospel Music - ဘုရားလူတို့ဝိညာဉ်အသက်တာတိုးပွား၍ အနီရောင်နဂါးကြီး ပြိုလဲ Myanmar Gospel Music (ကောင်းသောအနာဂတ်အတွက် လူသားများ ဘုရားကို ကိုးကွယ်ရမည်) Myanmar Gospel Music - သမ္မာတရားကိုလိုက်စားဖို့ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် သန္နိဋ္ဌာန် တိုင်းနိုင်ငံနှင့် လူမျိုးတိုင်းကို ဘုရားသခင်၏ စီရင်ချက်ကျူး Myanmar Gospel Music 2020 (ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင် တိတ်တဆိတ်ရောက်ရှိလာ) Chinese Worship Song Myanmar Gospel Music 2020 (အချိန်) Myanmar Worship Song 2020 (ဘုရား၏ဆင်းကြွခြင်းကို ဘယ်သူမျှ သတိမပြုမိ) | Music Video Myanmar Worship Song 2020 (ဘုရားသခင်တစ်ပါးတည်းသာ လူကို အချစ်ဆုံးဖြစ်သည်) MV Myanmar Worship 2020 (အို ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ကျွန်ုပ် အမှန်တကယ် မထိုက်တန်ပါ) လူလျှောက်လှမ်းရမည့် လမ်းများကို ဘုရားခွဲခန့်မှတ်သားပြီးဖြစ်၏ကျူး | Best Myanmar Gospel Song 2020(MV) Myanmar Worship 2020(လူသားအတွက်ဘုရားသခင် လုပ်ဆောင်သမျှတိုင်းသည်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်၏) Myanmar Worship Song 2019 (ဘုရားသခင်၏ကြွလာခြင်းနှင့် ကြုံဆုံရသည်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ ကံကောင်းလှပေ၏) အမျိုးသား သံပြိုင်- ဘုရား၏လုပ်ဆောင်ချက်များ စကြဝဠာပြင်ကျယ်ကြီးအား ဖြည့်ဆည်း Myanmar Gospel Music Video (ဘုရား၏မေတ္တာ ကျွန်ုပ်နှလုံးသားကို ဝန်းရံ) ခရစ်ယာန် အတွေ့အကြုံ ဓမ္မတေး (ဘုရားသခင်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကျွန်ုပ်တို့အား နီးစေပြီ) Myanmar Subtitles Myanmar Praise and Worship Song (ဘဝ သက်သေ) Christians Love God Unswervingly
ဆုံးမခြင်း၊ စစ်ကြောခြင်းနှင့် ဒုက္ခများကို
အတိတ်က “ဘုန်းတန်ခိုး” နှင့် “ကြည်နူးဆွတ်ပျံ့ဖွယ်ရာ” တို့
ယင်းကို မသိလိုက်ခင် လူသားနှင့်ဆိုင်သောပြုမူနေထိုင်ပုံ၏ အခြေခံသဘောတရားများကို
နားလည်လာပြီး လူသားတို့ကို ကယ်တင်ရေးအတွက်
ပေးအပ်လုပ်ဆောင်မှုကို ကျေးဇူးတင် လာသည်။
တဖြည်းဖြည်းနှင့် လူသားသည် ၎င်းကိုယ်တိုင်၏ရိုင်းပျကြမ်းတမ်းမှုကို ရွံရှာစက်ဆုပ်လာသည်။
သူမည်မျှရိုင်းစိုင်း သည်ကို စတင်မုန်းတီးလာသည်။
ဘုရားသခင်ထံ သူပြုခဲ့သည့် မလျော်ကန်သောတောင်းဆိုချက်များကို စတင်မုန်းတီး လာသည်။
သူသည် ထ၍ အနန္တတန်ခိုးရှင်၏ မျက်နှာကို ငေးကြည့်ရာ
လူသားသည် ဧဒင်ဥယျာဉ်သို့ ပြန်ရောက်နေသည့်အလားဖြစ်သည်။
မြွေ၏ ဖြားယောင်းသွေးဆောင်မှုများကိုလူသား နားမထောင်တော့ပါ။
ယေဟောဝါ၏ မျက်နှာမှ လှည့်မသွားတော့ပါ။
ဘုရားသခင် ရှေ့မှောက် လူသား ဒူးထောက်ကာ
ဘုရားသခင်၏ ပြုံးနေသော မျက်နှာကို မော်ဖူးပြီး
အို၊ ကျွန်ုပ်၏သခင်။ ကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင်။
Myanmar Christian Crosstalk 2020 (နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ တရားစီရင်မှု) English Christian Video
Myanmar Christian Crosstalk 2020 (ပညာရှိသတို့သမီးတွေဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ)
Myanmar Gospel Skit (သခင်တံခါးခေါက်နေသည်) | Have You Heard the Voice of the Lord?
Myanmar Gospel Skit (အမှန်ဆိုတာ အမှား မဟုတ်နိုင်ပါ) How to Discern the True Christ and False Christs
New Myanmar Christian Skit (ရဲ၏ လှည့်ကွက်များ)
Myanmar Gospel Skit - ဖြစ်ချင်သည့် စိတ်ကူး
Myanmar Gospel Skit (ဘုရားသခင်ရဲ့ နာမတော်သစ်) When the Lord Returns, Will He Still Be Called Jesus?
Myanmar Gospel Crosstalk 2020 (ကျွန်မတို့သင်းအုပ် ပြောတာက…)